But there are still - Inglês - Birmanês Traduçãoeexemplos
Você procurou por: but there are still many homeless (Inglês - Birmanês)
There are running jobs.
There are unsaved documents
There are some files left to burn
There are some more songs left to burn
There are some more videos left to burn
There are no videos to write to disc
There are no files to write to disc
ခွေကို ရိုက်ဖို့ ဖိုင်တစ်ခုမှမရှိသေးဘူး
There are no songs to write to disc
There are worldwide shortages of surgical masks.
ကမ္ဘာနှင့်အဝှမ်းတွင် ခွဲစိတ်ခန်းသုံး နှာခေါင်းစည်းများ ပြတ်လပ်နေသည်။
There are some things that we must keep doing.
မိမိတို့ ဆက်လက် လုပ်ဆောင်ရမည် အရာအချို့ ရှိသည်။
There are three vaccination strategies being investigated.
ကာကွယ်ဆေး မဟာဗျူဟာ သုံးမျိုးကို စမ်းသပ်ဖော်ထုတ် လျက်ရှိသည်။
There are unsaved modifications to your %s account.
သင်၏ %s အကောင့်ပေါ်တွင် မသိမ်းဆည်းရသေးသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ရှိသည်။
သို့သော်လည်း သင်တို့ ဆံခြည်တပင်မျှ မပျက်စီးရ။
အကြောင်းမူကား၊ အလွန်ကြီးစွာသော တံခါးသည် အဆင်သင့်၍ ငါ့အားဖွင့်လျက်ရှိ၏။ ဆီးတားသော သူအများလည်း ရှိကြ၏။
There are no alternatives as well digging is not possible.
ရေတွင်း​တူး​ရန် မ​ဖြစ်​နိုင်​၍ အခြား​နည်း​လမ်း​လည်း မ​ရှိ​ပေ။
ဓမ္မဆရာအမှု အထူးထူးအထွေထွေရှိငြားသော်လည်း သခင်တပါးတည်းရှိ၏။
Yet, “traditional” rickshaws are still the main transportation for many Antsirabe residents.
ဒါပေမဲ့​လည်း "ရိုးရာ" လန်​ချား​တွေ​က အန်​ဆီ​ရာ​ဘဲ ဒေသ​ခံတော်တော်​များ⁠များ​အတွက် အဓိက​သွား​လာ​ရေး​နည်း​အနေ​နဲ့ ဆက်​ရှိ​နေ​သေး​တာ​ပါ​ပဲ။
ဆုကျေးဇူးတော် အထူးထူးအထွေထွေ ရှိငြားသော်လည်း ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်း ရှိ၏။
However, there are calls for peer review of the research.
သို့သော် သုတေသနအတွက် အချင်းချင်း သုံးသပ်မှုများပြုလုပ်ရန် ခေါ်ယူမှုများ ရှိပါသည်။
afkorting van onderhandelbaar (Africâner>Inglês)m druger (Inglês>Hindi)not too young (Inglês>Hindi)es (Romeno>Inglês)onevenwicht (Holandês>Inglês)important terms (Inglês>Hindi)brugge (Holandês>Francês)dices (Português>Inglês)tumhara ghar kese chalta hai (Hindi>Inglês)quam fortunata sum (Latim>Inglês)spirulina (Inglês>Nepalês)esterna (Italiano>Tcheco)kasinglungat kasingkahulugan (Tagalo>Inglês)değiştir (Turco>Japonês)friendship goal (Inglês>Tagalo)incorrect, please try again (Inglês>Francês)nobody (Inglês>Tamil)not interested (Inglês>Português)batayan ng oras (Tagalo>Inglês)reife erfahrene votzen bilder (Alemão>Inglês)creme catalane (Francês>Inglês)subformat (Malaio>Inglês)thank you for your thoughts (Italiano>Inglês)je vais essayÃ© de me r'endor (Francês>Inglês)technically speaking (Inglês>Tagalo)